Uzibangele isigcwagcwa umqeqeshi we-Pirates - Ilanga News
Home Ezemidlalo Uzibangele isigcwagcwa umqeqeshi we-Pirates
UZIBANGELE isigcwagcwa umqeqeshi we-Orlando Pirates
ezakhe ziwashiswa ijezi yiSwallows kowama-quarter final weMTN8 ngoMgqibelo.
ITSHE limi ngothi kuJosef Zinn-bauer ongumqeqeshi we-Orlando Pirates njengoba kuvela ukuthi abaphathi bayo kabeneme ngokuphuma kwayo ekuseni kwiMTN 8 ebiyivikela.
IBucs iguqiswe yiSwallows FC ngo-2-1 kwi-quarter final yeMTN8 ngoMgqibelo kusihlwa e-Orlando Stadium, eSoweto. Amagoli okunqobe ngawo iSwallows abhajiswe enethini nguRuzaigh Gamildien kwathi eleBucs lashaywa nguKabelo Dlamini kuyiphenathi.
ILANGA lihoshe ngemithombo yalo ukuthi zibaliwe izinsuku zikaZinnbauer njengoba abaphathi ku-khona abangeneme ngakho ngaye.
“Indlela abophele ngayo isikimu nezinguquko azenzile utshengisile ukuthi udidekile.
“Ngendlela abaphathi abacasuke ngayo kangimboni ehlala isikhathi eside, empeleni kangimboni eqeda umzuliswano wokuqala ngapha-ndle-ke uma ezokwenza kahle emidlalweni yeligi neyeCaf. Kodwa yena abaphathi kabasamuzwa ka-hle,” kusho umthombo.
Lo mqeqeshi ekhuluma nabezi-ndaba emuva kwalo mdlalo, ukhale ngesifo sangesizini edlule athi na-manje kubukeka singakelapheki.
“ISwallows ibisicindezele sanga-kwazi ukuqhamuka nezimpendulo. Yiyona nkinga esibe nayo umdlalo usanda kuqala. Namaphutha-ke ngokunjalo, kunabantu abebenza amaphutha alimaze ikilabhu.
“Ngesiwombe sesibili sibe ngcono sakwazi nokwakha amathuba.
“Engingakusho nje wukuthi sibe neshwa kulo mdlalo, ngesinye isi-khathi uyayidinga inhlanhla enca-ne.
“Siyeke amathuba alula kodwa-ke yisifo sethu sangesizini edlule, kubukeka sibuya naso nangale sizini. Kodwa-ke isikhathi sisenaso kuzofanele sizame ukulungisa amaphutha,” kusho uZinnbauer.
Previous articleUphokophele kude umdweni wezithombe
Next articleUthi akasalali owebelwe usana olunosuku luzelwe